सुपर ओभरमा हैदरावादलाई हराउँदै मुम्बई प्ले अफमा, हैदरावादकाे के हाेला ? – AP Khabar
सुपर ओभरमा हैदरावादलाई हराउँदै मुम्बई प्ले अफमा, हैदरावादकाे के हाेला ?
२० बैशाख २०७६, शुक्रबार ०८:१२ 2019-05-03 एपी खबरLeaveaComment on सुपर ओभरमा हैदरावादलाई हराउँदै मुम्बई प्ले अफमा, हैदरावादकाे के हाेला ?
बैशाख २० एजेन्सी । इन्डियज प्रिमियर लिग अन्तर्गत हिजो राति भएको खेलमा मुम्बई इण्डियन्सले सनराइजर्स हैदरावादलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ । मुम्बईले दिएको १ सय ६३ रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदरावादले बराबर रन बनाएपछि मुम्बईले सुपर ओभरमा जित हात पारेको हो । योसँगै मुम्बई इण्डियन्स आइपीएल क्रिकेटको प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ।
घरेलु मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ६२ रन बनाएको थियो। मुम्बईका क्विन्टन डि ककले अविजित ६९ रनको बनाए। कप्तान रोहित शर्माले २४ र सूर्यकुमार यादवले २३ रन बनाए। हैदरावादका लागि खलिल अहमदले ३ विकेट लिए । भुवनेश्वर कुमार र मोहम्मद नाबीको नाममा समान १ विकेट रह्यो ।त्यसपछि ब्याटिङमा उत्रेको हैदरावादका लागि मनिष पाण्डेले अविजित ७१ रन बनाए । १ सय ६३ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको हैदरावादले २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १ सय ६२ रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको हो । हैदरावादलाई जितको लागि अन्तिम ओभरमा १७ रन चाहिएको थियो ।
पहिलो र दोस्रो बलमा हार्दिक पान्ड्याले एक – एक रन दिए पनि तेस्रो बलमा मोहम्मद नाबीले छक्का प्रहार गरेपछि खेल थप रोचक अवस्थामा पुगेकाे थियाे ।मुम्बईका लागि जसप्रित बुमराह,कुनाल पान्ड्या र हार्दिक पान्ड्याले समान २ विकेट लिए ।
चेन्नई सुपर किंग्स १३ खेलमा ९ जितका साथ १८ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ । मुम्बई १३ खेलमा ८ जितका साथ १६ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिदै प्ले अफमा पुगेको छ । दिल्ली १३ खेलमा ८ जितका साथ तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । हैदरावाद १३ खेलमा ७ मा हार र ६ मा जितका साथ चौथो स्थानमा स्थानमा यथावत छ । अब प्लेअफको बाँकी एक मात्र स्थानका लागि हैदरावादसहित चार टिमबीच प्रतिष्पर्धा हुने छ।
कटुवा पेस्तोल सहित एक भारतीय पक्राउ
रौतहटमा एक किलो सुनसहित एक पक्राउ
फेसबुके प्रेमी भेट्न जाँदा सामूहिक बलात्कृत
२ चैत्र २०७५, शनिबार ०८:४४ 2019-03-16 एपी खबर
कम उमेरमै कपाल सेतो हुने ५ खतरनाक कारण
४ बैशाख २०७६, बुधबार ०४:०४ 2019-04-17 एपी खबर
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०९:१४ 2020-06-11 एपी खबर
walgreens male enhancement products commented on साबधान ! फेसबुक म्यासेन्जरमा अटो म्यासजे जाने भाइरस आतंक: walgreens male enhancement products http://www.cialij.com/
chloroquine phosphate canada commented on जितपुरसिमरा ७ जितपुरद्धारा४ हजार थान मास्क वितरण: chloroquine phosphate canada https://azhydroxychloroquine.com/
albuterol sulfate inhalation aerosol hfa commented on भारतबाट फर्कनेहरूको भिडमा थिए कोरोना संक्रमित: albuterol sulfate inhalation aerosol hfa https://amstyles.com/
is ventolinageneric for albuterol sulfate commented on कोरोनाको तेस्रो संक्रमित भेटिए: is ventolinageneric for albuterol sulfate https://amstyles.com/
albuterol alternative drugs commented on हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्स फर पिपलको कार्यक्रममा ४ महिला सहित ६४ जनाले गरे रक्तदान: albuterol alternative drugs https://amstyles.com/
ventolin inhaler cost commented on शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा खारेजी मुद्दाको सुनुवाइ भोलि: ventolin inhaler cost https://amstyles.com/